Malunga Nathi-Shenzhen JKTech Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen JKTech Technology Co., Ltd. yahlanganiswa ngonyaka we-2014; Iofisi yeHQ ilIhlala kwisiXeko saseShenzhen, eTshayina. Yasekwa ziingcali eziphezulu ezineminyaka engaphezu kwe-15 yamava kushishino lweendibano ze-SMT.
Eyona njongo yethu iphambili ihleli igxile kwizixhobo zemveliso ezingabizi kakhulu kunye nolwazi lweteknoloji kubathengi bethu kushishino lokwenziwa kweSMT, sizimisele ukubonelela ngezona zisombululo zikhuphisanayo kweli shishini.
Ishishini lethu elikhulu kukubonelela kunye nokubonelela ngezisombululo ezisemgangathweni ze-SMT kunye noomatshini bendibano yombane kunye nezixhobo, such njenge-Laser solder ibhola jetting, ukunyanga kwe-UV, i-PCBA de-panel kunye ne-PCBA yokucoca oomatshini; Mengelixa sikwabonelela ngesisombululo esilungiselelwe usetyenziso olukhethekileyo kunye neemfuno zabathengi.
Inkampani ibisoloko ikhuthaza isicwangciso sophuhliso lwamazwe ngamazwe. ngobugcisa bethu bobuchwephesha kunye namava okuseka ubudlelwane obusondeleyo kunye namaqabane asekuhlaleni emhlabeni jikelele, inkonzo yobungcali njengesiqinisekiso kunye nokuma ngokuhambelana nomgaqo-win-win wenzuzo efanayo, sidala ixabiso elikhulu kubathengi.
Sinebhongo ngokufumana igama elihle kakhulu kwiimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu, amaxabiso akhuphisanayo, ukuhanjiswa kwangexesha kunye neenkonzo ezizinikeleyo kunye nenkxaso ekhawulezileyo ebesisoloko siyinika abathengi bethu.
Injongo yenkampani yethu kuku
※ Gxininisa kumanqaku entlungu kunye nemingeni yabathengi beshishini le-SMT;
※ Ukubonelela ngezona zisombululo kunye neenkonzo ezinokhuphiswano;
※ Ukudala ixabiso elonyusa ukhuphiswano lwabathengi;
※ Itekhnoloji entsha ibonelela ngehlabathi lezisombululo;
※ Izibonelelo ezidityanisiweyo ezinesatifikethi seCE;
※ I-10+ leminyaka yamava e-SMT;
※ Ixabiso eliphantsi & nomgangatho ophezulu;
※ Inkqubo yolawulo lomgangatho olusebenzayo;
※ Uninzi lweemveliso kunye nenkonzo engabizi kakhulu;
Ukuhanjiswa kunye neenkonzo
※ Uvavanyo lwesampulu ye-FOC;
※ Iqela lenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa;
※ Ukuphendula ngokukhawuleza kwiyure ye-1;
※ Izisombululo zokuqala kwiiyure ezingama-24;
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Solder Ball Soldering, Umatshini wokuSoldering weLaser ongaxhunyiwe kwi-intanethi, I-Pcb yePlasma ecocekileyo, I-Automatic Laser Ball Jetting, I-Pcb icocekile, Semi-Auto Laser Plastic Welding, Zonke iimveliso